Talo Ku Socota Amiirka Mujaahidiinta Al-shabaab | Halganka Online
Talo Ku Socota Amiirka Mujaahidiinta Al-shabaab
Posted on Abriil 21, 2010 by halganka
قال سبحانه: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
قال الله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
يقول الحق: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
قال الله تعالى: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
Waxaa farxad ii ah inaan maanta helnay walaal Amiir ah oo warqad loo qori karo. Waa ka yaxyaxi jirnnay inaan warqad u qornno niman u shaqeeya Zenawi iyo gaalada kale. Dad baa markay arkaan dhambaal iyo nasiixo ku socota walaal, in walaalkaas khalad ku jiro. Dadka sidaas wax u fahma ha akhriyeen xaddiiskan:
عن أبي تميم بن أوس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه البخاري و مسلم
Ilaah baa mahad leh in walaalaha Shabaab kuu doorteen Amiir. Mar Somalimemo.com soo galisay munaadarooyin ay is dhaafsaneyseen sheekhyo kale sanadkii 1997 waxaa ka hadlaysay markaas, baad hadda ku dhaggantahay. Ilaah ku mahadi xaqaas uu kugu dhejiyey. Maalintaas Burco ama Hargeysa baad Ina Cigaal marti ugu ahayd. Waxaad qaban kartay waxay ahayd uun inaad hadal xaqa ku caddeyso. Hadda adiga iyo walaalaha Shabaab iyo Mujaahidiinta kale Ilaahay wuxuu idiin sahlay inaad gacanta wax ku reebi kartaan. Sheekhii maalintaas kula doodayey ma filayo in Soomaalida badankeedu taqaan.
AMIIR, waxaan maanta danteydu tahay inaan idin ka dalbanno waxyaalo aad xaq u leedihiin. Waan ognahay in Ilaahay ummaddaas Soomaaliyeed idin ku gacanqabtay. Waan ognahay sida Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ahayd idinka ka hor. Hadda Kulliyaadkii Shanta ama Lixda ahaa ee diintu Ilaalin jirtay waad xafiddeen. Ha ahaato diin, Naf, Maal, Nasli, iyo Caqligaba.
Soomaali badan waa taageersan tahay shaqadaad waddaan. Waxa la idin ku taageeray ma ah qabiil, gobol, iyo koox gooni ah midna ee waa diin iyo xaqa. Markay noqoto Shareeco-ku-dhaqan iyo Xudduudaha oo la oofiyo ma aha arrin wadahadal ama gorgortan gasha. Munaadarooyinkaagii baan ka aragnay arrintaas. Labo Aayadood baa iiga filan:
يقول الحق: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
يقول الله تعالى : وما كان لمؤمنٍ ولامؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً
AMIIR, haddii sida dad qaarkiis idinkoo wax qaban kara inta gacmaha laabataan aad dadka ku fiirsataan gaalada iyo gaaloraacyada waxaa idin qaban lahaa nasuutan:
قال الله تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
قال صلى الله عيه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء، ويصبون على الذين أعلاها فيؤذونهم، فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. رواه البخاري وغيره
وعن أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم
AMIIR, arrintu maalinba meel bay maraysaa. Waxaa jirtay waqti aad aashuun-ku-addin ahaydeen. Waqti sidii xoolihii la idiin gowrici jiray ama la idin dhoofin jiray. Ilaahay baa mahad leh halkaad maanta joogtaan. Maanta Allaah mahaddii shacabku idinkay idin fiirsanayaan. Waxaad noo joogtaan halkii hogaamiyaha ugu sarreeya ee geyi. Mujaahidiintu iyagaa dadka u mudan inay raacaan Suubbanihii.
Sidaan nasuusta ku bilaabay waxaan idin ka rabnaa in idinkoo Jihaadka ku jira, haddana hadallada dadka loogu turo. Inkastoo wali dulmi la idin ku hayo oo gaalo iyo gaalo-raacyo la idin ku soo hogaanshay laakiin ma rabnno inaad cadkiinna khaaska ee aad xaqa u leedihiin goosataan: Waa la idiin cududaari karaa markaad si adag u hadashaan:
Mufasiriintu Suu’a Aayadda ku jira waxay ku sheegayaan xaq la dalbanayo sida xaqa marti laga seexday. Marka hadda waxaan idin ka rabnaa xaq badan ood leedihiin oo hadalka ah inaad nooga tagtaan ood nooga turtaan haddaan shacab nahay.
AMIIR, ani ahaan waan aaminsanahay in kooxaha idin ka soo horjeeda khaasatan Suufiyada iyo kuwa AMISOM raacay ku dhaceen “NAWAAQIDUL ISLAAM” laakiin Amiir saasooy tahay dad badan oo Soomaaliyeed baan saas arag. Marka waa cad yahay xukunka qolyaha idin la dagaalaya laakiin aniga danteydu waa shacab-kasbasho.
Mararka qaarkood waxyaalo aan ognahay oo noo cad, dhexdeena markay noqoto, shacabka caamada ah waa laga qarin karaa sida:
عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام قلت يارسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي ‏ ‏عائشة ‏ ‏إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. أخرجه البخاري /كتاب الأدب
AMIIR, nabigu (SCW) arrintaas masaajidka kama dhex oran ee hooyadeen Caa’isho buu ku siraystay.
Arrimahaan ka ergeynayo ma aha Xudduud oo taas ergo ma gasho ee keliya waxaan rabaa in hadal la oran lahaa Suufiyada iyo kuwa AMISOM raacay in loo daayo inaan shacabku maqlin. Ama xitaa odayaal qaab darran oon ognahay oon iimaanku si fiican u gelin in markay idiin yimaadaan si fiican loo soo dhaweeyo sida xaddiiska kore ku cad.
AMIIR, iguma diideysid in aabbayaal iyo hooyooyin Soomaaliyeed wali ixtiraam u hayaan Suufiyaasha oo aysan la socon waxay yihiin:
فقال سبحانه: يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ
Arrintaas darteed ka warran Amiir, haddii markaad shacabka la hadlaysaan aad kelmadaha Mushrikiin iyo Murtadiin danta shacabka darteed loo hakiyo oo lagu bedello kalmada aan qofna inkiri karin sida kooxaha Zenawi u shaqeeya? Ama kooxaha gaalada u shaqeeya oo waddankooda ku soo hogaaminaya cadowga? Qofkii diinta yaqaan waa ogyahay inay gaalo yihiin. Qofkaan diin badan aqoonna waa ogyahay in Kenya iyo Addis Ababa lagu shirayo.
Markay Fatwo iyo cilmi noqoto runta sheega iyo xukunka laakiin qofka hogaamiyaha ah inuu caamada hadalka u dooro waa wax meesha ku jira. Iyadoo sidiinnoo kale saxaabadu ku jirto Jihaad baa nabigu ku lahaa:
قال صلى الله عليه وسلم: …, لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حُمُر النعم. أخرجه البخاري
Marka AMIIR, Yuhuud iyo Nasaaro oo shirki iyo gaalnimo ku jira baa Ahlu Kitaab loogu yeeraa. Marka innagoo shacabkeenna soo dhoweysaneyna haddaan gaaladeenna magac farsameysan ugu yeerno si aysan shacabku lafteenna nooga shakin maxaa ku jaban? WALLAAHI Amiiroow, aniga laftayda iima sahlana inaan nimankaas caayda ka dhaafo laakiin anigu fursad baan heystaa! Dad badan ma fahmi karaan fursaddaas! Ma jirto wax ka fiican oo ka xorriyad badan markaadan lafo qof xukumin. Marka Amiir, adiga fursaddaas ma heysatid oo waxaa dhabarkaaga saaran culeys aan Ilaah kaaga baryeynno inuu kuu fududeeyo. Sideedana ogoow Amiir, Jihaadkaad ku jirtaan wiilal badan oo kheyr Ilaah la doonay baa samayn kara laakiin arrintaan idin ka dalbanayo waa arrin ku adag nafta binu Aadamka. Xaddiiskaan aan milicsanno. Waa Xaddiis saxiix ah oon filayo inuu Imaamu Muslim wariyey:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
Run ahaantii Amiir:
Sidaad cadowga uga aarsataan kugu ciseeyaaye
Marka AMIIR, arrintaan dalbanayo waa arrin saas u weyn oo wax ka soo baxa arrintaasba iska yar yihiin. Marka adoo shacabka u daneynaya waxaan ku talin lahaa in afhayeenku erayada kala xusho oon bal meel cabbaar ku xirnno kalmadaha Mushrikiin iyo Murtaddiin. Waxaad Amiir ogtahay kuwii Salafiyo sheeganayey ee dad idiin ku dhowaa in culumadoodii u hambalyeeyeen heshiiska la leeyahay wuxuu dhexmaray Zenawi iyo Jamhadda Midowga Soomaali Galbeed! Ragga hambalyada diraya waxaa ku jira kuwii munaadarada ka ahaa garsoorayaal! Waxaad is leedahay iyagaa Suufiyada ka daran! Marka dhibkaas jira darteed yeysan nimankaasi shacabka idin ku dirin.
Shacab ahaan waxaa miisaan weyn leh warka Afhayeenka iyo Waaliyaasha. Amiir, maaddaama Islaamku Shuuro yaqaan xitaa haddaad codsiga naga aqbasho, weli dadkaad madaxda u tahay waa kugula doodi karaan waxyaalo muuqda. Heshiiska Xudeybiya saxaabadu (RC) qaarkood wey diideen inay ka masaxaan warqaddii Sifooyinkii Allaah iyo Risaaladii. Cumar Binu Khidaab (RC) waatuu nabiga (SCW) kala hadlay arrintaas. Markuu nabigu (SCW) rabay inuu ku tukado munaafiqii Ibnu Salool waa tii Cumar ku dhagay marada nabiga (SCW) isagoo Cumar (RC) leh: sideed ugu tukaneysaa munaafaqa.
Marka Amiir, waxaan filayaa in dadkaad madaxda u tahay mar mar kugula doodi karaan wax iyaga istusa oo muuqda. Marka arrimahaas oo kale sida in niman gaalo ah in gaalo lagu sheego waa u haysaan daliil laakiin innagu waxaynnu fiirineynaa oo loo turayaa shacabka. Dhibtu waxay ka imaaneysaa markaynnu dhahnno gaalo maaha. Marka mas’aladu waa saas.
Waxaan madaxda kale ee Shabaabka iyo kulligoodba xasuusinayaa inay Ilaahay ku mahadiyaan kheyrkaas. Sidoo kale haku farxeen in hogaankii Abuu Zubeyr ka xigsaday.
Yaa ka farxad badan qof kheyrkaas ku dhexjira oon ahayn mas’uulka koowaad? Cumar Binu Khidaab (RC) markay nabiga (SCW) iyo Abuu Bakar (RC) noolaayeen wuxuu ahaa Mujtahid isagoo taagan fiqi kala soo baxa diinta. Wuxuu saas u yeelayey isagoo ogaa in mas’uuliyadda laga xigo.
Waan ogayn inuu Waxyiga ku raacay mas’alooyin badan laakiin Cumarkii saas ahaa markuu noqday mas’uulka koowaad hal mar buu isbeddelay oo waxay gaartay xitaa markay mas’alo yar soo kororto inuusan fatwo ama xukun ka bixin jirin ilaa uu kulmiyo Muhaajiriin iyo Ansaar! Cumarkii seefta u heystay Munaafiqiinta iyo xitaa saxaabigii Xaadib Binu Abii Baltacah (RC) markuu warqadda u qoray reer Makkah waa kan hadda marka isaga la caayo laakiin la xasuusiyo Aayadaha Ilaahay istaagaya oon far qaadayn:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً، فقال عيينة لابن أخيه ‏:‏ يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن عمر‏.‏ فلما دخل قال‏:‏ هِىَ يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه حتى همّ أن يوقع به، فقال له الحر‏:‏ يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم‏:‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ‏ وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري
AMIIR, waxaa la rabaa Jihaadka oo socda in aan laga daalin in nimankaas la waaniyo. Yaa looga tagaa? Ma Zenawi? Ilaah baa wax hanuunsha laakiin adinku waa inaad dariiqa tustaan. Wax dhib leh uma arko idinkoo shacabkiinna soo dhoweysanaya inaad nimankaas xitaa magacaas ay ku ciyaareen loogu yeero ama ugu yaraan aad tiraahdaan: nimanka Ahlu Sunnah la baxay. Ama shuftada ama wax saas oo kale ah. Saan magaca Ahlu Kitaabku waxba ugu tarayn gaalada Yuhuudda iyo Nasaarada ayaan magac la qurxiyeyna wax ugu tarayn nimankaas qubuuraha iyo gaalada laga kari la’ yahay. Sidoo kale Amiirul Mu’miniin Cali Binu Abii Daalib (RC) waa wanaajiyey magaca loogu yeero Khawaarij isagoo leh: waa walaalaheen oo nagu gardarooday. Marka dambigii nabigu (SCW) ka sheegay Khawaarijta meesha kama baxayo laakiin Imaamu Cali (RC) wuxuu ahaa hogaamiye.
Waana shaqada hogaamiya inuu usluub fiican ku hadlo. Marka walaaltinimada Amiirku sheegtay waxba kama bedeleyso xukunka Khawaarijta. Xaddiiskii Imaamu Muslim wariyey, saxaabigii Jaabir Binu C/Laahi (RC) baa niman badan oo mabda’a Khawaarijta qabay ka reebay markuu si fiican ula hadlay. Hadda qubuurihii la caabudi jiray oo laga biqi jiray markaad si fiican ula dhaqanteen, dad badan baa xaqii u soo noqday oo leh: haddii meydkaas na caawin karo; wiilashaas yar yar ee Shabaab bay iska celin lahaayeen!
AMIIR, danteennu maaha in la tago Galgaduud iyo meelo noocaas ah oo keliya. Insha Allaah cirkeynnu higsaneynnaa marka naga tiirsha shaqallada. iyagoon u qalmin haddii Suufiyaasha sidii Imaamu Cali magaca loo qurxiyo waxaa dhici karta in taasi saameyn ku yeelato qaar ka mid nimankaas iyo taageerayaashooda. Sidoo kale idinkoo Jihaadka wada waa inaad ugu yeertaan wada-hadal iyo is-waanin.
Hala soo celiyo safiirradii la isku diri jiray. Sidoo kale waxaa dhici karta in qaar ka mid ah is leeyihiin hadday dagaalka ka baxaan waa ka aarsan doontaan oo jeegadaad ka bireyn doontaan.
Marka cabsi beyba dagaalka u joojin la’yihiin qaarkood. Marka mar kasta kheyr inaad la jeceshihiin ugu yeera.
Runtii heshiisyada aad ka waddaan beelaha Soomaaliya lama mooga sida heshiiskaad dhexdhigteen Garre iyo Gaaljecel iyo dhinaca kale Abgaal iyo Xawaadle.
Marka Insha Allaah, adigaa waddanka madaxa u sarreeya noqonya mar dhow ee dadkaaga kasbo. Amiir, haddii nasteexada la qaato oo magac-bixinta looga turo Suufiyada wax awood ah uma kordhineyso iyaga.
Laakiin waxaa laga yaabaa inay wax u tarto ooy khaladkooda arkaan, dad badan oo raacsanaana ka soo haraan. Marka Ilaahay Jihaadkii idinku toosi ee kan ah in si tartiib ah loo hadlo Allaha idin ku irzaaqo.
Haddii Amiirku arrintaas naga yeelo waxaan ka codsaneynaa madaxda kale iyo barbaartaba inay arrintaas oon dhibka lahayn ku raacaan Amiirka. Marka waxaan ku soo xirayaa Xaddiiskii Saxiixa ahaa ee kor ku xusay:
« Dowladda kmg ah oo sii labo jibaartay barakcinta ay ku hayso dadka degen hareeraha Xeryaha ay degen yihiin Ciidamada shisheeyaha. Saraakiisha Mujaahidiinta ee shalay lawareegay degmada Galcad oo meel fagaara ah kula hadlay shacabka degmadaasi oo dhibaato ku qabay Maleeshiyaadka qabuuriyiinta. »